आधा नै बाधा (व्यङ्गत्मक लेख) | Connecticut Chautari
Home लेख आधा नै बाधा (व्यङ्गत्मक लेख)
आधा नै बाधा (व्यङ्गत्मक लेख)
पुरा का कुरा गर्दा जति मज्जा आउँछ ,आधाका कुराले उति नै बाधा गर्दछ । पुरानो भनाई आधा गाग्री पानी बढी छचल्किन्छ भन्ने कुराले हामीलाई निक्कै ठूलो झापड हान्दछ । हुनत हामी ज्ञान सीपको बारेमा आधा गाग्री पानी जस्तै नै हो । हल्का केहि जानियो भने सबै आफैंले जानेको छ जस्तो भान हुँनु हाम्रो चरीत्र नै भैसक्यो भन्दा “सेऊले काका” रिसाउंदैनन । केहि काम समाजका लागि गरियो भने सारा समाज आफैंले बनाए जस्तो /चलाए जस्तो भान हुँनु आधा हुनुको पुरा अर्थ हो । आधा ग्लास पानीलाई भरिएको छैन भनेर हेर्ने कि, केहि त छ, भनेर हेर्नेहरुको द्वन्द यो सृष्टि रहिरहुन्जेल चलिरहला तर आधा गाग्री पानी बढी छचल्किन्छ भन्ने कुरा चाहिं पक्का ह
आधा लुगा लगाएकी सुन्दरीको प्रभाव पनि आँखा देखि शरीर भरी नै पर्छ भनेर स्विकार्छन “सेऊले काका” ।
माथि, तल ,दायाँ ,बायाँ हेरेर अाँखा झुक्याउन खोजे पनि आँखाले देखेको आधा, पुरा हुन राति कोठामा पसेर बत्ती निभाएर सिरक भित्र पस्दा पनि पुरा हुँन सक्दैन । हुँनत ति आधा लुगावाली सुन्दरीको चहना पनि ति “सेऊले काका”को दिमाग आधा पर्नु नै हो ।
आफैंसङ्ग परेको घटनाको आधा कहाँनी यहाँ राख्न मन लाग्यो । म गत अप्रिल महिना नेपाल गएको बेला अमेरिकी पैसा नेपाली बनाउँन सट्टा गर्ने पसलमा पुगें । गंगबु चोक नजिकै एउटा त्यस्तो पसल भेटियो जहाँ बोर्डमा मैले खोजे जस्तै लेखिएको थियो । तर पसलको सर्टर भने आधा मात्र खोलिएको थियो । साँझको पारिलो घाम ताप्दै प्राय सबै पसले बाहिर बाटा तिर बसेका थिए । मैले पसलको सर्टर आधा खुलेकोले साहु जी यतै कतै होलान भनेर दायाँ बायाँ आँखा घुमाएँ । पसलमा को आउला र सेवा दिउँला, भनेर आधा लुगा लगाएकी एक दुई वटी सुन्दरी बहिनीहरु साईडमा बसेका रहेछन । मेरो आँखा तिनीहरु सङ्ग जुध्यो । मैले ठाँने यिनै बहिनीहरु रहेछन् साहुनी । पैसा साट्नको लागि कुरा राख्न खोज्दा मलाई तिनीहरुले ऊनीहरु भए तिरै आउँन इसारा गरे । म जाने तर्खर गरें । तर त्यहाँ मलाई चिन्ने अर्को दाइ पनि हुँनुहुदो रहेछ । उहाँले भन्नुभो त्यता नजानुस भाइ । यिनीहरु डलर साट्ने नाममा आधा सटर खोलेर आधा लुगा लगाएर उता भित्र लगेर तपाईको डलर पनि आधा बनाउँछन र तपाईको दिमाग पनि आधा बनाईदिन्छन ।
हैट, ति बहिनीहरु लाई देखेर आधा भएको मेरो दिमाग एकै छिनमा उहाँ दाइको कारण ठाउँमा आयो ।
त्यस पछि यि आधा लुगा लगाउँने ,आधा ज्ञान भएका ,राम्रो कुरा आधा मात्र सुन्ने, सही कुरा लुकाएर आधा मात्र भन्ने सङ्ग म सजक हुन्छु ।
Previous articleत्यो चिहानमा बस्न मित्र एक रत्ति पनि डर लाग्दैन
अमेरिकामा तपाईंको पहिलो घर कसरी किन्ने?
सम्पादकीय - July 8, 2020 0
दिपक खतिवडा अमेरिकामा तपाईंको पहिलो घर कसरी किन्ने?(How to buy your first home in America ?)
नेकोन ले समाजमा खेल्नु पर्ने भूमिका
के पी भट्ट वेष्टहार्टफोर्ड कनेक्टिकट नेपाली समाज कनेटिकेट ले स्थापना काल देखि समाज का विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पुयाऊदै...